Keita Balde Diao - युवा सेनेगलकी प्रतिभा, अब को लागि इटालियन "लाजियो" खडा जो स्पेन, जन्म। फुटबल खेलाडी मात्र 21 वर्ष पुरानो र उहाँले पहिले नै मानिन्छ वर्ष को अर्को जोडी साँचो खोज, माथि खेलाडीहरू को एक दुनिया मा सबै भन्दा राम्रो क्लब को कुनै पनि लागि वक्ता हुन सक्छ। Keita Balde बाँकी winger को स्थिति खेल्छ, तर यो एक बहुमुखी आक्रमण हो। यसलाई यदि आवश्यक विस्थापित गर्न सकिँदैन र सही flank मा, र मिडफिल्डर आक्रमण को केन्द्रीय स्थिति कब्जा।
Keita Balde स्पेन, सेनेगलकी आप्रवासी एक परिवार मा मार्च 8, 1995 मा जन्म भएको थियो। क्याटालान "बार्सिलोना" - पहिले नै पाँच वर्ष उहाँले त्यो एकेडेमी संसारमा सबैभन्दा बलियो क्लब को एक उत्प्रेरित गर्न सक्षम थियो अघि उहाँले पूर्ण चार वर्ष बिताए जहाँ क्लब गरेको फुटबल एकेडेमी "Damm", थियो। त्यहाँ प्रतिभा को धेरै छ उसलाई भेट्यो र राम्ररी उहाँको साथ काम गरे। धेरै त, 15 keita Balde को उमेर मा एक सानो क्लब, "कर्नेल," जहाँ उच्चतम स्तर मा मिलान अभ्यास रही मा भाडा मा पहिले नै पठाइएको छ। 2011 को गर्मी मा Baldé एक ऋण फर्केको छ, तर क्लब विचार यसलाई मूल उद्देश्यले थियो यो रूपमा प्रतिभाशाली छ, खेलाडी चासो गुमाए। स्वाभाविक, उहाँले क्लबहरू धेरै किन्न चाहन्थे, तर सबै भन्दा चुस्त इटालियन पनि एक सानो खेलाडी लागि तीन सय हजार यूरो गर्ने भुक्तानी "लाजियो"।
अकादमी जाँदै, "लाजियो"
तर keita Balde त्यतिबेला त सेनेगलकी स्पेनिश मूल क्लब को नींव लागि प्राप्त भएको थिएन, केवल सोह्र वर्षको थियो भूल छैन - उहाँले अठार वर्षको अघि उहाँले अर्को दुई वर्ष बिताए जहाँ युवा एकेडेमी, गए। 2013 मा, एक पेशेवर सम्झौता उसलाई थियो - र Balde उच्चतम स्तर मा आफूलाई पहिले नै देखाउन मौका मिल्यो।
"लाजियो" को रूपमा प्ले
Keita Balde, जसको जीवनी यसलाई दिन रूपमा तर जवान खेलाडी को प्रतिष्ठा असर सकेन जो "बार्सिलोना", अझै, सबै भन्दा प्रभावशाली तरिका विकसित छैन। "लाजियो" को पहिलो सिजन मा, त्यो पर्याप्त खेल समय पायो र धेरै प्रभावित। उहाँले छ लक्ष्य स्कोरिङ, 35 मिलान प्ले छ, तर क्षेत्र मा अर्को सिजन पहिले नै एक सानो कम देखिन्छ। तर सिजन 15/16 मा, त्यो लगभग एक टोली नियमित, आफ्नो युवा उमेर त बावजुद भएको छ। "लाजियो" Balde लागि कुल 12 गोल जसमा 84 मिलान बिताए। क्लब संग आफ्नो सम्झौता 2018 सम्म चल्छ, तर उहाँले यस्तो प्रभावशाली प्रदर्शन जारी छ भने, सम्झौता निश्चित विस्तार गरिनेछ - को winger केही शीर्ष क्लब किन्न भनेर समयमा पूरा हुनेछ भने, बिल्कुल। हालको मौसम मा Balde दुई लक्ष्य स्कोरिङ, क्षेत्र छ पटक गयो र दुई सहायता दिनुभयो। जसले सम्पूर्ण 337 मिनेट खेलेका 21 वर्षीय खेलाडी लागि प्रभावशाली तथ्याङ्क,।
2014 मा, Balde को "लाजियो" मा राम्रो परिणाम देखाउन सुरु गर्दा उहाँले म आफ्नो आमाबाबु आए जहाँ सेनेगल, राष्ट्रिय टोली लागि कल गर्न, उहाँले स्पेन राष्ट्रिय टोलीलाई भनिन्छ गर्न सम्म प्रतीक्षा गर्न चाहन्थे किनभने इन्कार - उहाँले यो देश मा जन्म भएको थियो र एक डबल छ नागरिकता। Balde राष्ट्रिय उहाँले नाइजर को टोली विरुद्ध खेलमा आफ्नो debut गरे जसको लागि, सेनेगल को टोलीलाई अर्को निमन्त्रणा प्राप्त मार्च 2016 मा त तथापि, निमन्त्रणा कहिल्यै, आए।
सेप्टेम्बर keita मा राष्ट्रिय टोली लागि आफ्नो पहिलो लक्ष्य नामिबिया विरुद्ध खेलमा गोल गरेका थिए, र अर्को खेल मा र दोस्रो लक्ष्य चिन्ह लगाइएको - केप वर्ड ढोकाहरू यो समय। सबै जवान winger सबै, जबकि राष्ट्रिय टोली लागि पाँच मात्र मिलान, दुई लक्ष्य र एक पास स्कोर (यति Balde दुवै लक्ष्य स्कोरिङ कि खेलमा आकर्षित संलग्न थियो पनि, केप वर्ड विरुद्ध खेलमा दिइएको थियो जो)।
उसलाई अगाडि एउटा अत्यन्तै प्रतिभाशाली मान्छे रूपमा ठूलो क्यारियर लागि प्रतीक्षा गर्दै। यो विशाल छ यो लागि सम्भावित - बेला सबैलाई यो एक शीर्ष खेलाडी बन्न सक्षम हुनेछ, तर वर्ष को अर्को जोडी मा विपरीत Balde प्रमाणित गर्न संभावना छ विश्वास गर्दछन्।
अष्ट्रीया प्रतिभा दाऊदले Alaba
संसारको सबै भन्दा राम्रो footballers सूची: जो "सुनको बल" प्राप्त
आज एक पुस्तिकाको के हो? आफ्नै एक पुस्तिका कसरी बनाउने?
के Rooting छ? Android मा रही जड-अधिकार
कस्मेटिक्स यसको सौन्दर्य एक बाटो रूपमा Desheli-।